About us - Jiangxi Earth Superhard Izixhobo Co., Ltd.
Jiangxi Earth Superhard Izixhobo Co., Ltd.
Ezincamathelayo izixhobo zedayimani ezibunjiweyo ziye zajoyina, kungekuphela nje ukwandisa iintlobo zeempahla zethu, kodwa kwakhona masityhale imfundiso entsha kwiCast iron industry eya kuba namandla aphezulu kunye nokusebenza kakuhle kunye nokukhusela okusingqongileyo kunye nokugcina amandla.
Izixhobo ezinkulu zemveliso zisivumela ukuba senze ii-odolo ezikhawulezayo, kwaye i-R & D yethu ihlala isebenza ngokusondeleyo nabaxumi bethu ekusebenzeni ngcono kunye nokuphila ixesha elide okuxhamlayo kwiprojekthi nganye, ngaphandle kweminyaka emininzi iiakhawunti ze-OEM ezithembekileyo sikwabonelela ngeemveliso zibhangqwe kakuhle kulo lonke uphawu olukhulu izixhobo kwimarike.
Sineqela eligqibeleleyo lenkonzo yabathengi kunye nenkqubo egqibeleleyo yokubonelela abathengi ukubonelela ngentengiso efanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu, kwintengiso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa. Iimveliso zethu kunye neenkonzo zamkelwa ngabenzi befanitshala abaninzi abaziwayo kwaye baba ngabanikezeli bazo abatyunjiweyo beesarha zesarha. Njengabathengisi kunye nabasebenzisi baseTshayina babona, asinakufumana kuphela uluhlu olupheleleyo lweemveliso ezikumgangatho ophezulu, kodwa nokufumana inkxaso yobuchwephesha kunye neyobugcisa kunye nenkxaso yolawulo. Ehluke ngokupheleleyo kwimodeli yeshishini elinye lesiko, siza kukwenzela inkqubo yokuthengisa yanamhlanje, kubandakanya nophuhliso lwentengiso, ulawulo lokuthengisa, ukwaneliseka kwabathengi, uqeqesho kubasebenzi, uqeqesho lwenzuzo kunye nezinye iinkqubo. Sizama konke okusemandleni ethu ukukunceda ukuba uphuhlise kwaye uphucule, ukudibanisa indawo yakho yentengiso, kwaye akuncede ube yimpumelelo kwintengiso yengingqi.